Izindawo ezihamba phambili ze-Ecommerce 2016-2017 | Izindaba ze-ECommerce
Izindawo ezihamba phambili ze-Ecommerce 2016-2017
Ngabe unezinto ongazigodla futhi ufuna ukwenza inzuzo esikhundleni sokuzilahla? Awunaso isikhathi sokuhlela ukuthengiswa kwegaraji? Ngabe ufuna ukuthenga umkhiqizo omusha ngaphandle kokushiya ikhaya? Lapho-ke ngokuqinisekile uzoba nentshisekelo yokwazi izingosi ezihamba phambili ze-inthanethi ukwenza ukuthengisa / ukuthenga kwakho imikhiqizo; Lawa amasayithi amahle kakhulu we-ecommerce 2016-2017 namuhla.
Lezo eziqale njenge- iphrojekthi yokuthengisa yasendaweni encane ngo-1995, I-Craigslist yathandwa kakhulu e-United States yabe seyenzeka emhlabeni wonke njengamanje etholakala emazweni ahlukene. Kuyindlela enhle yokuthengisa nokuthenga izinto ezingamasekeni ezinjengamaselula, izinto zokudlala umdlalo wevidiyo, izincwadi, njll.
Uma unentshisekelo kumikhiqizo eyenziwe ngezandla nesitayela sokuvuna, I-Etsy yisayithi le-Ecommerce lakho. Isungulwe ku-2005, Namuhla i-Etsy inabathengisi abangaphezu kwezigidi eziyi-1.4. Ku-Etsy ungathenga futhi uthengise imikhiqizo ethokozisayo eyenziwe ngezandla, enesitayela esiyingqayizivele nesidonsa amehlo.
"Thola konke ngaphandle kokujwayelekile." Lesi yisiqubulo seBonanza, isiza se-Ecommerce lapho ungathola khona ngemikhiqizo ejwayelekile. Kulula ukuyisebenzisa, uma ufuna ukudala isikhundla sakho sokuthengisa, ungasenza ngokwezifiso ngokudala isitayela esidonsa amehlo kumakhasimende akho wesikhathi esizayo.
Enye ye amasayithi amakhulu we-ecommerce laphaya, lapho ungathola futhi uthenge cishe noma yimuphi umkhiqizo ongawucabanga. Kutholakala emazweni angaphezu kwe-15, kunabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezingama-240; I-Amazon iqale njengesitolo esikhulu sezincwadi. Kepha ngokuhamba kwesikhathi kuye kwanda, futhi namuhla kuphezulu kakhulu ohlwini lwamasayithi amakhulu kakhulu ukuthenga online.
Sonke sizwile nge-ebay ngasikhathi sinye; Okukodwa kwe amasayithi okuthengisa nge-inthanethi enkulu kunazo zonke emhlabeni. Inabasebenzisi abakhuthele abangaphezu kwezigidi eziyi-150 futhi ithandwa kakhulu kangangokuthi kukhulunywa ngayo nasemabhayisikobho aseHollywood. Ku-ebay ungathola konke kusuka kumikhiqizo ye-elekthronikhi, ezincwadini nakumageyimu wevidiyo. Ngaphandle kokungabaza, i-ebay iyisibonelo esihle kakhulu se-Ecommerce ngokusemandleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Izindawo ezihamba phambili ze-Ecommerce 2016-2017
Izibonisi ezintsha zokwakhiwa kwamasayithi we-Ecommerce
Amathiphu okuphatha i-Ecommerce ekuxhumaneni nomphakathi